Muuse Biixi “Dowladda Somalia ayaa caqabad ku ah in Somaliland hesho aqoonsi” | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Muuse Biixi “Dowladda Somalia ayaa caqabad ku ah in Somaliland hesho aqoonsi”
Muuse Biixi “Dowladda Somalia ayaa caqabad ku ah in Somaliland hesho aqoonsi”
Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumadiisa ay mudnaanta kowaad siin doonto sidii ay Soomaaliland aqoonsi u heli lahayd.
Muuse Biixi oo xalay ka hadlayay xaflad lagu xusayay sanad- guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay asaaskii Somaliland ayaa sheegay in muddada ay doonto ha ku qaadatee ay ku dadaali doona hellidda ictiraaf.
“Yoolkeena kowaad waa ictiraaf inaanu helno oo uu noqdo Somaliland qaran jira oo qeyrkii wax la qeybsada golayaasha caalamiga ah oo aysan cidina matali karin, waqti kasta ha nagu kacdo,qiima ay doonto ha noogu kacdo, dhiigii loo soo daadiyay mid ka badan ayaanu u daadinaynaa hadii ictiraafka loo baahdo,” ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland.
Sidoo kale Madaxweyne Muuse Biixi ayaa Carabka ku dhuftay in xukuumadiisa ay ka go’an tahay qabashada dorashooyiinka dabayaaqada bishan May 2021, isla markaana haatan ay socdaan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee Doorashada.
Isaga oo sii hadlaayay Madaxweynaha Somaliland Biiix ayaa waxaa uu dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay caqabad ku tahay sida uu sheegay aqoonsi ay Soomaaliland hesho.
Ugu dambeyn Madaxwayne Biixi ayaa sheegay in Somaaliland ay doonayso in caalamka oo dhan nabad ay kula noolaato, isagoona ku baaqay in la laga dheeraad wax kasta oo dadka kala geyn kara
Maqaal horeRa’iisul Wasaare Rooble iyo Beesha Caalamka oo Maanta kulan yeeshay
Maqaal XigaMidowga Yurub oo Madaxda Soomaalida uga digay inuu fashilmo Shirka 20-ka May